समुद्रको पानी किन नुनिलो हुन्छ ? कहाँबाट आउँछ त्यति धेरै नुन ? - बडिमालिका खबर
यो कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ कि समुद्र तथा महासागरको पानी नुनिलो हुन्छ । तर सबैलाई थाहा नहुन सक्दछ कि समुद्रको पानी किन नुनिलो हुन्छ ?
बाजुराका ६ स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति हुने
सुदूरपश्चिमका ४३ स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्न ३८ करोड बजेट निकासा